Guudlaawe oo baaq u diray beelo ku dagaallamaya Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Guudlaawe oo baaq u diray beelo ku dagaallamaya Hiiraan
Wuxuu ka dalbaday Maamulka gobolka, hay’addaha amniga, Nabadoonada iyo Waxgaradka reer Hiiraan, inay si dhaqsi leh ugu baxaan joojinta colaadda ka aloosan Waqooyiga Beledweyne.
JOWHAR, Soomaaliya - Beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka Kabxanley ee Waqooyiga Beledweyne, ayuu baaq nabadeed u diray Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe.
Wuxuu ka dalbaday Maamulka gobolka, hay’addaha amniga, Nabaddoonada iyo Waxgaradka reer Hiiraan, inay si dhaqsi leh ugu baxaan joojinta colaadda ka aloosan Waqooyiga Beledweyne.
Dagaalladan u dhaxeeya dadka walaalaha ah ee wada degga Hiiraan, ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab ah, Sidoo kale waxaa ay iska gubeen guryo iyo beero.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday labada dhinac inay si shuruud la’aan ah ay u joojiyaan dagaalka.
Ciidamo ka socda dowladda Soomaliya, maamulka Hir-Shabeelle iyo kuwa Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM ayaa maanta ku baxay daminta colaadaas ee ka taagan degaannada Kabxanleey iyo Deefoow ee Waqooyiga Beledweyne.
Qaar ka mid ah shacabka Beledweyne ayaa banaanbax kala hortagay ciidamadan oo ay ku eedeeyeen inay in muddo ah isku fiirsanayeen beelaha walaalaha ah ee colaaddu ka dhex abuurantay, balse markii dambe ayaa lagu qanciyay in ay ujeedadoodu tahay inay kala dhex galaan oo ay heshiisiiyaan labada beelood.